WARBIXIN: KHILAAFKA CARABTA, DOORKA DAWLADA FEDERAALKA IYO MAAMUL GOBALEEDYADA | kowtharmedia.com
Home WARAR WARBIXIN: KHILAAFKA CARABTA, DOORKA DAWLADA FEDERAALKA IYO MAAMUL GOBALEEDYADA
WARBIXIN: KHILAAFKA CARABTA, DOORKA DAWLADA FEDERAALKA IYO MAAMUL GOBALEEDYADA
Muranka Diblomaasi ee Khaliijka oo dhameystay asbuuc welina aan xal loo helin ayaa u muuqda in dadaalkii Kuwait iyo Turkey guul dareystay, halka ree galbeedkuna weli ka aamusanyihiin, lamana oga in ay ku mashquuleyn arimahooda gudaha iyo in ay rabaan in ay isku jabaan korna ka fiirsadaan sida ay ula dhaqmaan dawladaha IGAD oo kale.
Dawlada Fedaraalka oo qaadatay mawqifka dhex-dhexaad ah laguna amaanay waxaa hor-yaala laba culeys oo u baahan go’aan adag iyo midnimo Qaran, waxeyna kala yihiin;
1. Dawladaha Imaaraatka, Sacuudiga iyo Masar oo galaan-gal iyo saameyn ku leh Siyaasada, Hay’adaha iyo Madaxda Soomaaliya heer Gobal iyo heer Fedaraal, umana arkaan go’aanka dawlada Somaliya dhex-dhexaad ee waxey u arkaan taageero dawlada Qadar iyo mawqifkooda oo la yasay ama la yareystay, waxeyna adegsanayaan culeys-saar Siyaasadeed, dhaqaale, saaxiibo, shakhsi, cabsi iyo rajo-gelin intaba.
Waxeyna isku dayayaan hadii ay ka quustaan dawlada Fedaraalka in ay u yeeraan oo adeegsadaan maamul-gobaleedyada sidii sanadkii hore ay ugu wada yeereen Abu dhabai kadibna ku amreen in ay macaaradaan M. Xasan ayna taageeraan RW Cumar, xoogaa dhaqaale ahna qaataan.
2. Maamul gobaleedyada oo xiriirkooda dibada aan ka amar qaadan dawlada Fedaraalka una kala tartama mid kasta sidii dibada looga aqoonsan lahaa ama looga maal-geli lahaa.
Maalma ka hor waxaa xiriirkii Diblomaasi, Hawada, Badda iyo Dhulka jaray maamulka Somaliland, Sharif Xasan oo looga bartay in aysan maalmahaan oo kale Cumradu dhaafin ayaa isna DB World u Cumra tegay, sidoo kale Wasiiro Puntland ayaa jooga Abu dhabai maalmahan.
Hadii dawlada Qadar ay isticmaasho hawada Somaliya, Somaliland-na ay xirto, Wasiir gaadiidka Federaalkuna Canada u joogo dacwada sidii hawda Somaliya loogu soo celin lahaa sow arintu uma eka; laba nin oo bidaar leh ama xiiran oo isku dacweysay Shanle, kadibna Qaadigii ku amray in beri ay yimaadan iyaga oo tima leh hadii kale loo xukumi-doono Shanlada nin kale oo tima leh. Waxaan is wey diiyey goormee Somali-land xiiriir Diblomaasi la yeelatay Qadar si ay uga goosato?
Waxaa la ogyahay in dawlada kaliya ee Carbeed ee xafiis u furtay Somali-land ay tahay dawlada Imaaraatka oo awood u leh in ay si toos ah ula xiriirto, heshiisyana la gasho maamul-gobaleedyada iyada oo aan soo marin dawlada Fedaraalka iyo hay’adaheeda sharciga ah.
Hadaba hadii ay dhacdo in culeys awgiis wax laga bedelo go’aanka dawlada waxaa lala kulmayaa laba khasaaro oo kala ah; magac iyo sharaf dhac dawlad-nimada iyo in aysan dawladu ka talin dalkeeda.iyo In dhaqaale macno leh aan lagu siin, mar hadii aysan go’aan adag laheyn sidii tii Iran oo kale.
Hadaba Shacabka taageeray go’aanka dawlada M. Farmaajo ma uga hiilin-doonan dawladaha iyo maamulada culeyska ku haya oo raba in uu ka laabto go’aankiisa oo ma garab-istaagi-doonaan sidii shacabka Turkey ay u garab-istaageen M. Ordugan xiligii Inqilaabka, mise weli Qabiil iyo Gobaleysi ayaa nakala qeybin-doona???
Previous PostDaawo Sawirro: Madaxweynaha Puntland oo Furay Kal-fadhiga 39aad Ee Baarlamaanka Puntland. Next PostDaawo: Golaha Wasiirada oo maanta ka dooday qodobo ay ka mid yihiin Qaraxii Pizza House.